Ma ciyaari karaa qaar ka mid ah filimada ee Apple TV? Sida caadiga ah, filimada in aan la iibsaday dukaanka Lugood ay ku guuldareysato inay ka ciyaaro Apple TV, u qaabab filimka laga yaabaa in la socon karin TV Apple. Inkastoo, ay jiraan waqtiyo Lugood iibsaday filimada wali ma ciyaari karo TV Apple qaar ka mid ah xayiraad sida oggolaansho ama incompatibility iwm Lugood iibsaday filimada ama aan Lugood iibsaday filimada, haddii aad dhibaato ku iyaga ku ciyaari Apple TV, waxaad ka heli kartaa halkan xalka ugu wanaagsan. Diinta wax movie in TV Apple oo markaas ku riyaaqayaa naftaada waa halkan wax sidaas u fudud.
Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waa qalab loo baahan yahay, kaas oo kaa caawin kara inaad badalo filimada iyo Lugood caadi filimada u iibsaday inay Apple TV qaabab ay taageerto, si aad iyaga ka ciyaari karaa TV Apple aan loo kala soocin. Waa wax aad wax ku ool ah oo si sahlan loo isticmaalo. Hadda, kaliya waxa ay isku dayaan in ay kaa caawiya xallinta dhibaato weyn daqiiqado yar gudahood.
1 filimada in app this Add
Marka hore, soo dhoofsadaan filimada aad doonayay in app this. Si aad u samayn, dhufatey button xitaa your computer dooro filimada aad rabto in aad ku shuban. Ka dib markii in, dhammaan filimada aad rabto in aad si loogu badalo ayaa lagu qoran Murayaad bidix ee filimka si Apple Converter TV.
2 Dooro TV Apple ah oo ay taageerayaan qaab wax soo saarka
Waa maxay qaabka ugu wanaagsan ee TV Apple? Waxba ka yaqaan? Ha welwelin. App waxa uu ka hor-goob ugu wanaagsan ee TV Apple. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah oo kaliya sida magaca qalabka. Riix qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad oo taga si "qaab"> "Video" category> "Apple TV" ama "Apple TV HD". Labaduba waa si buuxda u la jaan TV Apple.
Ka dib markii dhammaan faylasha waxay leeyihiin qaab ee la doortay sida qaab wax soo saarka, kaliya wax miiran "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan diinta video. Mudo intee leeg ayay qaadan doontaa inta badan ku xiran tahay tirada oo dhan files laga keeno. Dabcan, aad ha karo waxa maamula ee asalka ah. Ka dib markii diinta, waxaa jira macluumaad ku yidhi "Hawlaha la soo dhammaatay". Just guji muuqday "Folder Open" badhanka si aad u ogaato faylasha la gediyay.
Hadda, aad ku raaxaysan kartaa filimada ku saabsan TV Apple. Si aad u samayn, jiidi faylasha la gediyay ka folder saarka maktabadda Lugood ka dibna u hagaagsan in Apple TV. Waa intaas.
> Resource > Video > ma ciyaari karaa Movies on TV Apple